हाइ प्रोफाइल पिटरको पत्याउनै गाह्रो अपराध! :: PahiloPost
हाइ प्रोफाइल पिटरको पत्याउनै गाह्रो अपराध!
8th April 2018 | २५ चैत्र २०७४
काठमाडौं : दुई साताअघि ६० वर्षीय क्यानेडियन नागरिक पिटर जोन्स डाल्गिस त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रिए। विमानस्थलबाट उनी सिधै पुगे काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिका।
पिटरको यो पहिलो नेपाल भ्रमण थिएन। वर्षमा कम्तिमा पनि उनी दुई पटक नेपाल आउँथे। देउपुरमा पिटर पुग्नुको उद्देश्य थियो उनकै निजी संस्था। पिटर हिमालयन कम्युनिटी फाउन्डेसनका संस्थापक। संस्थाले विपन्न समुदायलाई शिक्षा र खानेपानीमा सहयोग गर्थ्यो।
केही समयअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको टोलीलाई सूचना हात लाग्यो – पिटर त बालयौन दुराचारी हुन् अर्थात् पेडोफिल। सूचनालगत्तै प्रहरीले पिटरको विवरण संकलन थाल्यो। चाखलाग्दो के रह्यो भने प्रहरीले उसको सूचना खोज्दा सबै विवरण फरक निस्कियो।
पिटर क्यानडाका सम्मानित नागरिक रहेछन्। युद्ध पीडित बालबालिका, सडक बालबालिकाको क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकोमा उनले तीन वटा मानार्थ विद्यावारिधीसमेत् प्राप्त गरेका रहेछन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)मा सिनियर अर्बन एड्भाइजरको रुपमा लाइबेरियामा काम गरिसकेका पनि।
यति हाइ प्रोफाइलले कूकृत्य कसरी गर्लान्?
प्रहरी नै द्विधामा पर्‌यो। द्विविधाकै बीच पिटरको निगरानीमा सिआइवी टोली काभ्रे पुग्यो।
११ रोपनीमा रहेको भव्य भवन। बरिपरि अग्ला पर्खालले घेरिएको। पिटर यहीँ बस्थे। तीन दिनपछि मात्र प्रहरी आफ्नो सूचनामा ढुक्क भयो। पिटर आफ्नै कोठामा बालकहरुसहित भेटिए। विपन्न परिवारका बालक ल्याई प्रलोभनमा पारेर यौन दुराचार गर्ने उनको चरित्र खुलासा भयो। व्युरोका प्रमुख डिआइजी पुष्कर कार्कीले भने, 'पिटर यौन दुराचारकै लागि पटक-पटक नेपाल आउने गरेको देखियो। उनी हाइप्रोफाइलका व्यक्ति हुन्।'
पिटर पछिल्लो डेढ वर्षमा समातिने सातौं पेडोफिल हुन्।
अन्य देशको तुलानामा कमजोर कानुन र विपन्नतालाई मध्यनजर गरेर यौन दुराचारीले नेपाललाई 'हब' बनाउँदै आएको डिआइजी कार्कीले बताए। 'नेपालको सामाजिक परिवेश पनि अन्य देशको तुलानमा फरक छ। फेरि हाम्रोमा पाका उमेर समूहका मानिसलाई सहजै विश्वास गर्छौं। त्यसैले पनि नेपाल उनीहरुको रोजाइ बन्छ,' डिआइजी कार्कीले भने। त्यसमाथि विदेशी भन्नासाथ समाजमा विश्वास जित्न समय नै लाग्दैन। अभाव र विपन्नताले गाँजेको समाजमा विदेशी अनुहारलाई 'दाता' मान्ने संस्कार विकास भएकाले पनि सजिलै यस्ता व्यक्तिहरुले नेपालमा सेल्टर पाउने गर्छन्।
बाल यौनदुराचारमा पक्राउ पर्ने अधिकांश ५० वर्षभन्दा बढी उमेरका छन्। विदेशमा रहेर नेपालमा आउने दुराचारीको रेकर्ड व्यूरोमा आइसकेकाले प्रहरी उनीहरुको निगरानीमा लागेको डिआइजी कार्कीले बताए।
हाइ प्रोफाइल पिटरको पत्याउनै गाह्रो अपराध! को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।